Ukuguqulwa kwe-Ofisi-iMbali kunye noNcedo
Ngethuba nje uorhulumente okanye neminye imibutho ekhona kwiofisi sele ikhona ngenye indlela njengendawo yokuqhuba imisebenzi echaphazelekayo yokuphatha okanye yokubhala.
Iofisi ye-19 yePhondo
Ngasekupheleni kwekhulu le-19 , iiofisi zorhwebo zokuqhuba ibhizinisi kuqala zavela eMelika. Umzila , i-telegraph kwaye ke umnxeba waqulunqwa avumela ukuthetha ngokukhawuleza kwangoko. Nomaphi apho kwenziwa khona, umzekelo kumatshini okanye kumveliso, iofisi yolawulo ngoku ingafakwa kude.
Ezinye izixhobo ezakhuthaza iofisi zibandakanya: ukukhanyisa kombane , umatshini wokubhala , kunye nokubala oomatshini .
Amanye amaHlathi e-Ofisi
Mhlawumbi isimboli esikhulu seofisi sihlalo weofisi kunye nedeski. Ngethuba le-1876 Centennial Exposition ePhiladelphia, izixhobo ezintsha zeofenitshala kunye nefenitshala zaziyimiboniso ethandwayo. Isiboniso sibonisa iidkski eziphezulu kunye neenkqubo ezintsha zokufakela ezintsha. Udibaniso lwedesk yagqitywa emva kokuqulunqwa komatshini wokubhala njengendlela yokuyila i-rolltop ayilungileyo yokubeka umatshini wokubhala.
Ofisi ye-20 ye-Century Office
Ngo-1900, abantu abangaba ngu-100 000 eUnited States babesebenza njengobhala be-secretaries, abagcini be-stenographers kunye nabadlali be-ofisi. Umqeshwa osemgangathweni wayeqeshwe ngeeyure ezingamashumi ayisithupha kwiveki yomsebenzi weentsuku ezithandathu. Uqeqesho oluthile luye lwafumaneka kubantu abanqwenela ukufunda izakhono zeofisi.
Ukuzalwa komgca omhlophe kunye neofisi kuthetha ukuba iiyure ezininzi ngosuku abasebenzi beeofisi babeza kuhlala beqhuba imisebenzi.
I-Ergonomics kukulungiswa kwamava phakathi kwabantu, kunye nezinto eziyilwe kunye neendawo ezidibeneyo kunye nazo ziye zadlala indima enkulu ekwakheni izinto ezisetyenziswa kwiofisi yangoku.
Qhubeka >> iWindows Machines
Imbali ye-Ice Cream Sundae
Biography kaRobert Hooke
I-Compass kunye nezinye izinto zeMagnetic Innovations
UFrancis Cabot uLowell kunye noMnxeba weMandla
Umlando omfutshane weTape Tape
5 Ama-Stereotypes aqhelekileyo aseMerika eFilimu nakwiThelevishini
Umlando weMbali Umda wee-1900s
Ngethuba elithile, ixesha elithile, kunye namaxesha athile
Ukwahlukana phakathi koHibernation kunye ne-Torpor
I-RPI GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Indlela yokuPhumela iiProjekthi ze-imeyili kwiZikolo eziPhezulu zeCrod - uze ufumane izimpendulo
Oko Kufuneka Ukwazi Ngomlambo Wokukhala okanye kwiWall Wall
Uluhlu oluphezulu lwe-10 lwee-Movie zaseItaly
I-Allele: I-Genetics Definition
Indawo yaseWernicke kwiBrain
Yintoni iHolen e-Redan eGoli?
Into enokuyenza Ukuba Uwela ngaphandle kweCandelo elincinci lokuTya
Iziqinisekiso zoBumbe beWebhu
Imbali kaCharles Starkweather
Iindlela ezili-10 eziphezulu zokuzikhusela kwi-SUV kunye ne-Minivan ukweba
I-California State University-Monterey Bay (CSUMB)
UDarci Pierce - Umbulali kaCindy Ray
I-Glossary Track and Field ukusuka ku-K
Iziganeko eziMfutshane (ifomfutshane)